Chachoengsao - Wikipedia
Chachoengsao (Thai: ฉะเชิงเทรา, kaga hadlay [t͡ɕʰàʔ.t͡ɕʰɤ̄ːŋ.sāw]) waa magaalo (mueang thesaban) ee bartamaha Thailand, ee xarunta Gobolka Chachoengsao. Waxay ku taal bangiyada Bang Bang Pakong. Waxaa ka mid ah tambon Na Mueang iyo qaybo ka mid ah Ban Mai, Bang Tin Butros, Wang Takhian, iyo Sothon Degmada Chachoengsao Mueang. Laga soo bilaabo 2006 waxay lahayd dad ah 60,893.
Magaalada ayaa waxaa loo aasaasay in 1549 inta lagu guda jiro boqortooyada King Maha Chakkrapat of Ayutthaya iyo asal ahaan waxay ahayd xarun loogu talagalay qorista ciidamada. Inta lagu guda jiro boqortooyada King Maha Thammaracha, boqortooyada ku jiray xaalad daciif ah ay sabab u tahay in la adkaaday Burmese ah. Phraya Lawaek, boqorkii Khmer ah, ka dhowr magaalo oo ay ka mid yihiin Chachoengsao qortaaan Thais in ay uu ciidanka shaqada.
Chachoengsao waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa "Paet Riu", oo ah magac ka soo kalluumeyaal badan oo la soo dhaafay. Paet Riu waxaa macnaheedu yahay "siddeed jarjar" ama xaleef ah oo loola jeedo sida kalluunka loo kariyey oo u adeegay saxan gudaha ah ee Chachoengsao. Magaalada waa 50 km bari ee Bangkok iyo waxaa laga heli karaa tareen. 
sido kale fiiri[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Chachoengsao&oldid=210229"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 12 Maarso 2021, marka ee eheed 17:56.